'I-Starman' Tesla kwi-Space igqibezela i-Orbit yeLanga, ngoMeyi ungqubeka eMhlabeni - Ezintsha
Eyona Ezintsha 'I-Starman' iTesla ethunyelwe emajukujukwini igqibezela ukujikeleza kwelanga, ngoMeyi ekugqibeleni yengozi eMhlabeni
'I-Starman' iTesla ethunyelwe emajukujukwini igqibezela ukujikeleza kwelanga, ngoMeyi ekugqibeleni yengozi eMhlabeni
Kule foto yesinikezelo ebonelelwe yi-SpaceX ngoFebruwari 2018, iTesla Roadster yasungulwa kwi-rocket ye-Falcon Heavy enomqhubi we-dummy ogama lingu-Starman iintloko ezibhekise kwi-Mars.I-SpaceX nge-Getty Izithombe
umva umfowunelwa ukhangela i-id simahla
Kwiinyanga ezilishumi elinesibhozo ezidlulileyo, inkampani yeerokhethi kaElon Musk iSpaceX yasungula ngempumelelo irokethi yayo yokuqala yeFalcon Heavy, eyona inamandla emhlabeni, isemajukujukwini neTesla Roadster yobuqu kaMusk ngo-2008. Ukwenza ukumiliselwa kube mnandi ngakumbi, uMusk wabeka idummy enxibe i-spacesuit egama lingu Starman kwisitulo sokuqhuba se-Roadster kwaye wamenza ukuba aphulaphule ii-loops ezingapheliyo zika David Bowie Ukungaqhelekanga kwesithuba ebudeni bohambo.
Ukusukela ngoko, u-Starman uchithe ngaphezulu kweentsuku ezingama-550 kwindawo engaphandle. Ngoku ka UphiRoadster.com , indawo ezimeleyo elandelela indawo yexesha lokwenene lemoto yombane, isithuthi besigqibile ukujikeleza okokuqala elangeni ngeCawa, sihamba malunga ne-763 yezigidi zeekhilomitha ukusukela oko kwasungulwa kunyaka ophelileyo.
BONA KWAKHO: U-Elon Musk Ufuna 'iNuke Mars' ukuze abantu baphile
Ukuba ibhetri ibisasebenza, u-Starman umamele Ukungaqhelekanga kwesithuba 151,881amaxesha okoko wasungula, indawo yokulandela umkhondo ithi. Kodwa loo nto ayinakulindeleka, kuba ibhetri kaTesla izakuhlala kuphela malunga neeyure ezili-12 emva kokuphakanyiswa, utshilo uMusk kwi-Falcon Heavy's post-launch briefing e-Kennedy Space Centre kunyaka ophelileyo.
Indawo yangoku yeStarman imalungaI-185 yezigidiIikhilomitha ukusuka eMhlabeni, ngokwendawo yokulandela umkhondo. Ukuze ukwazi ukuyibona ukusuka apha, umntu uya kufuna iteleskopu enobubanzi obungange-43,823 yeenyawo.
I-Roadster ebomvu ebomvu ekuqaleni yayithunyelwe kwindlela eya kwi-Mars 'orbit. Ngenxa yemeko yemoto engaginyisi mathe, oososayensi beeplanethi babenexhala malunga nongcoliseko lwebhaktiriya nje ukuba ingene kwiplanethi ebomvu, eyayiza kuphazamisa iinzame zesayensi zokukhangela ubomi eMars.
Kodwa ukubala kamva nguYunivesithi waseToronto ngeenkwenkwezi uHanno Rein uqikelele ukuba uRoadster uza kuthi gingxi eMhlabeni, eVenus okanye elangeni — kwithuba nje leshumi leminyaka.
Njengoko kwaxelwa kwangaphambili lubalo, ngo-Novemba ophelileyo, u-Starman wadlula kwi-Mars orbit kwaye waqhubela phambili kwinkqubo yelanga waya kwi-asteroid belt.
Imoto okwangoku isuka eMhlabeni ngesantya esimalunga nokuIikhilomitha ezingama-988 ngeyure, nge UphiRoadster.com . Iya kubhabha kufutshane neMars kwakhona nge-7 ka-Okthobha kunyaka olandelayo kwaye isondele kakhulu eMhlabeni rhoqo emva kweminyaka engama-30.
Isifundo sikaRein sicebisa ukuba singade sifumane umbono weteleskopu we-Roadster kwisithuba seminyaka eli-100 ukuba imoto ibhabha kumgama omnye wenyanga-yoMhlaba.
Emva kwendlela yesithathu yomhlaba ebhabha, indlela yeRoadster iya kusiba nesiphithiphithi kwaye ingalindeleki ngenxa yomtsalane womhlaba oza kubangela utshintsho oluncinci kwezinye zeeparitha zemoto ezijikelezayo ngalo lonke ixesha isondela.
'Abagcini beGalaxy' I-Cast ibuyela eMhlabeni ukuze ihlolwe kwangaphambili
Umhlobo weCurator Rebeccah Blum Ubuza ilizwe lobugcisa ukuba liyeke ukukhuthaza umsebenzi wakhe wokubulala
Iqela lase-Alt-Ekunene lizama itanki 'iBlack Panther' amanqaku e-Tomato abolileyo
Eli Hashe leMfazwe ayiloHashe nje leMfazwe
wierd al dont khuphela le ngoma
yenze malini imatriki
ezilinganayo izidlidliza zabafazi
Umama kunye netreyile yokuhamba ngenqanawa yetom